अति भो भारतीय मिडियाको हर्कत ! – Massive Khabar
Homeसमाचारअति भो भारतीय मिडियाको हर्कत !
२५ असार, काठमाडौं । भारतीय मिडियाको विषयमा एउटा भनाइ विश्वव्यापी चर्चित छ– यिनीहरु सबैथोक गर्छन्, सिवाय पत्रकारिता । सुन्दा अतिरञ्जना लागे पनि भारतीय मिडियाको आम चरित्रलाई यही भनाइले सबैभन्दा बढी न्याय गर्छ ।
सर्वत्र स्वीकारिएका पत्रकारिताका तीन मूल मन्त्र हुन्, वस्तुनिष्ठता, निस्पक्षता र विश्वसनीयता । तर, यो भारतमा लागू हुँदैन । भारतीय मिडियाका लागि तीन मूल मन्त्र हुन्– टीआरपी, टीआरपी र टीआरपी । टीआरपीभन्दा बाहिर उनीहरु केही सोच्न चाहँदैनन् । प्रोपोगाण्डाको आगो दन्काएर टीआरपीको रोटी सेक्नुलाई उनीहरुले पत्रकारिता भन्छन् । अधिकांश भारतीय मिडियाले बेच्ने समाचारको स्तर सडकमा गरिने उछृंखल नारावाजीभन्दा पनि निम्नकोटीको हुन्छ ।
भारत विश्वकै ठूलो प्रजातन्त्र हुनुमा गर्व गर्छ । सिद्धान्तमा भारत प्रजातान्त्रिक मुलुक नै हो । तर, व्यवहारमा ? व्यवहारमा चाहीँ भारतको प्रजातन्त्र उनीहरुका लागि मात्र हो, जो सत्ताको दास बन्न तयार छन् । धार्मिक र जातीय अल्पसंख्यकका लागि त्यहाँ प्रजातन्त्र छैन । र, उनीहरुका लागि बोलिदिने मिडिया पनि छैनन् । भारतीय मिडिया सत्ताको दुन्दुभी बजाउनमै गर्व गर्छन् ।
आम सञ्चारभित्र पनि समाचारमूलक टीभी च्यानलहरुको झन् दुर्दशा छ । यी टेलिभिजनका न्यूज एंकरहरु समाचार पढ्दैनन्, भुक्छन् । प्राइम टाइममा देखाउने ‘टक शो’ सँग त हामी सबै परिचित नै छौं । टक शोका नाममा टीभी प्रस्तोताहरु अतिथिमाथि हुलहुज्जत गरेको पाइन्छ । ती कार्यक्रममा अतिथिलाई विचार मन्थन गर्न होइन, झाँको झार्न बोलाइन्छ । भारतीय टीभी प्रस्तोताका अगाडि हाम्रा ऋषि धमला पनि शालीन लाग्छन् ।
भारतमा अल्पसंख्यक, खासगरी मुस्लिम समुदाय राज्यसँगै मिडियाको कोपभाजनमा पर्दै आएका छन् । सन् २०१४ मा नरेन्द्र मोदी सत्तामा आएपछि मुस्लिम समुदायका लागि आफ्नै देश बिरानो बनेको छ । राज्यको नजरमा सबै मुस्लिमहरु देशद्रोही र पाकिस्तानी एजेन्ट हुन् । राज्यको यही भाष्यलाई मिडियाले काँधमा बोकेर हिँडेका छन् । उनीहरुलाई राज्यले अह्राइरहनु पनि पर्दैन । मोदीले ‘आँ’ पनि गर्न नपाई अलंकार बुझ्न सक्ने क्षमता भारतीय मिडियामा छ । मुस्लिमलाई बदनाम गर्ने अभियानमा आजतक, जी न्यूज, रिपब्लिक न्यूज, नेटवर्क १८ जस्ता च्यानलहरु प्रतिस्पर्धारत छन् ।
भारतमा लकडाउन जारी रहेको बेला टिभी प्रस्तोता अर्नब गोस्वामीले रिपब्लिक टीभीमा चिच्याउँदै प्रश्न गरे, ‘किन मस्जिदको अगाडि मात्रै मानिसहरुको भिड लाग्छ ?’
गत वर्षको फेबु्रअरीमा भारत प्रशासित काश्मिरको पलुवामामा आतंकवादी समूहको आक्रमणमा परी ४६ भारतीय सैनिक मारिए । उक्त आतंकवादी समूहलाई पाकिस्तानले संरक्षण दिएको भन्दै भारतीय वायूसेनाले बदलास्वरुप पाकिस्तानी भूमिमा पसेर बम फ्याक्यो । भारतीय टीभी च्यानलहरुले भारतको बमवर्षाबाट पाकिस्तान ध्वस्तै भएको जसरी समाचार प्रशारण गरे । पाकिस्तानतर्फ ठूलो नरसंहार भएको दावी उनीहरुले बिनाप्रमाण गरिरहे । तर, अन्तमा पुष्टि भयो कि भारतीय लडाकु बिमानले मानिसहरुको आवादी नभएको बालाकोटको जंगलमा बम खसालेर भागेको थियो । उक्त विष्फोटमा केही रुखहरुमा क्षति पुगेको थियो भने एउटा भंगेरा मरेको थियो ।
तर, दिल्लीस्थित नेपाली दूतावास भने भारतीय मिडियाले एकपछि अर्को कपोलकल्पित र भ्रामक समाचारहरु प्रकाशन/प्रशारण गरिरहँदा पनि मस्त निद्रामा छ । टाइम्स अफ इन्डियाजस्तो प्रतिष्ठित पत्रिकाले समेत नेपालका प्रधानमन्त्रीको तस्वीर दुरुपयोग गर्यो । त्यसमा आपत्ति जनाएर दूतावासले एउटा पत्रसमेत पठाउन सकेन । जिटीभीको रिपोर्टमा पनि उसले अहिवलेसम्म चासो दिएको छैन ।
पुर्व एसएसपी तथा अधिवक्ता भन्छन्, ‘पुडासैनीको बाहिरिएको भिडियोले मात्र रवी दोषी छन् भनेर यदि कसैले भन्छ भने त्यो गलत हुन् जाने छ’ ! (भिडियो)